फेसबुक संसार - Kamana News
रातको समय थियो । खाना खाएर बसेकी थिएँ । एकछिन फेसबुक चलाएर पढ्न थाल्छु भनेर फेसबुक चलाउन थाले । पहिला न्यूजफिडमा गएर हेरे त्यसपछि आफ्नो मेसेन्जरमा आएको नयाँ मेसेजहरु चेक गरे । एकछिन मेसेजहरु हेरे पश्चात नयाँ रिक्वेस्टहरु चेक गर्न थाले । करिब ९० रिक्वेस्ट आएको रहेछ । ती मध्य सबभन्दामाथि एक फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आएको रहेछ । मैले प्रोफईल चेक नगरी सबभन्दामाथि आएको नचिनेको व्यक्तिको रिक्वेस्टलाई निश्चित गरे । म आफ्नै काममा व्यस्त भएँ ।
केही समयपछि एउटा मेसेज आयो । हेड च्याटमा त्यो मेसेज देखियो । हाई यू आर भेरी क्यूट भनी आएको त्यो मेसेजलाई मैले खोले र थाहा भयो कि त्यो मेसेज केही समय मैलै निश्चित गरेको त्यो फेसबुक रिक्वेस्टको हो । मैले केही पनि रिप्लाई गरिन् । एक सातापछि फेरी त्यही आईडीबाट राम्री भनेर नबोलेको हो ? भनी मेसेज आयो अनि मैले पनि रिप्लाई गरे, हो नी ? त्यसपछि फेरी फेरी आउन थालेको त्यो आईडीको मेसेजलाई मैले मतलब गरिन ।
करिब एक महिनापछि मेरो कुनै स्टोरीमा कमेन्ट गर्नुभयो । मैले धन्यवाद भने । त्यसपछि हामीबीच कुराकानी हुन थाल्यो । आफ्नो बारेमा परिचय दिदैँ सुरु भएको त्यो कुराकानी बढ्दै गयो । मिनेटौको कुरा घण्टौँमा परिणत भयो र त्यसैगरी दिनप्रति दिन कुराकानी बढ्दै गयो र एक अर्काको बानी हुन थाल्यो । उ,म अनि त्यो फेसबुक संसार बाहेक केही थिएन जस्तो लाग्न थालेको थियो । बिहान उठ्दा सबैभन्दा पहिले उसको हेड च्याट हेर्ने बानी लाग्यो । उसको मेसेज नआउँदा अत्यन्त दःुख लाग्न थालेको थियो । मेरो रातको समय हुदाँ उसको दिउँसो हुने गथ्र्या । प्राय उँ काममा हुदाँ म रातको खाना खाएर सुत्नेबेला हुन्थ्यो । उसको फोनको प्रतिक्षामा म सधैँ हुन्थेँ । उसको फोन र टेक्सट नआएको दिन मलाई अधुरो लाग्न थालेको थियो ।
उसले मलाई एक दिन मेरो फोन र मेसेजको प्रतिक्षामा उ पनि कुरेर बस्ने गरेको मैले थाहा पाउँदा सारै नै खुशी लागेर आएको थियो । केही समयपछि हामी बिच प्रेम बस्न थालयो । उसले मलाई भनेको आई लब यू को त्यो क्षणमा मेरो संसार नै बेग्लै भएको थियो ।
उ ब्रिटेनमा र म नेपालको दुरी थियो हाम्रोबिच । पेसबुकमा चिनजान भएको पनि चार बर्ष भएको थियो । उ नै मेरो र म नै उसको संसार भइसकेका थियौँ । हामी कहिले पनि भेटेनौँ । उ कहिले नेपाल आएन र म कहिल्यै ब्रिटेन गईन । यसरी नै हाम्रो प्रेमकथा चल्दै गएको थियो । उसले मलाई धेरै वाचा गरेको थियो । एउटा छुट्टै संसार बनिसकेको थियो ।
एकदिन म ब्लक भए । मलाई सारै पीडा भयो । मैलै धेरै प्रयास गरे उसंग कुराकानी गर्न तर सकिन । केही समयपछि मैलै धेरै प्रयास गरेर एक साथीको सहयोगले उसको त्यो आईडीमा प्रवेश गरे । त्यो उसको छुट्टै आईडी रहेछ । उसको सक्कली आईडीमा मैले फेक आईडीबाट प्रवेश गरे । उसको विवाह एक दिन अगाडी भइसकेको रहेछ ।
यसरी फेसबुबमा सुरु भएको संसार फेसबुकमै सीमित भयो ।
शुक्रवार, पौष ३ २०७७०४:५३:२७